Xog..Inta Laga Ogyahay Iyo Waxa Aan Laga Ogeyn Kiiska Ikraan Tahliil | Xaqiiqonews
Xog..Inta Laga Ogyahay Iyo Waxa Aan Laga Ogeyn Kiiska Ikraan Tahliil
Qoyskeeda ayaa baadi goobaya Ikraan Tahliil oo horay uga tirsaneyd Sirdoonka NISA, waxaana ilaa hadda calaamadul su’aal weyn dul saarantahay badqabkeeda.
Hooyo Qaali oo ah hooyada dhashay Ikraan Tahliil oo qaraabo dhawna ay yihiin agaasimihii hore ee NISA Sambaloolshe ayaa sheegtay in gabadheeda loo maleynaayo in ay afduubteen NISA, madaama goobta hoygeeda ku yaalay ee laga afduubtay ay adagtahay in uu soo galo gaari shacab ah.
Abdalla Abdalla oo ka horay uga shaqeeyey NISA, ayaa sheegay in uu helay xog sheegeysa in Ikraan Tahliil la khaariyey isla habeenkii la afduubtay oo aheyd 26 Juun, isaga oo sheegay in hilibkeeda oo la jarjaray lagu aasay meel qarsoodi ah.
Sidoo Kale Aqri: Xaqiiqonews Oo Heshay Xogta Iyo Sawirka Mid Ka Mid ah Ragii Al-shabaab Toogteen
Xildhibaan Jeesow oo ka mid ah xildhibaanada DF-ka, kana mid ah xildhibaanada barlamaanka ku matala Ikraan ayaa muuqaal uu iska duubay ka dalbaday dadka wax ku qora baraha bulshada in aysan baahin xoga aan la hubin oo ku saabsan “Ikraan” waxa uuna sheegay in wadaan baaritaan ay qeyb ka yihiin Farmaajo iyo Rooble.
Maxaa La Ogyahay
Sida ay xaqiijiyeen qoyska gabadha, Ikraan ayaa xilli habeen ah gaari nooca raaxada ah oo loo maleynaayo in wadeen dad ay is garanayaan, ka raacaday gurigeeda oo ku yaal meel u dhaw xarunta NISA.
Xogta ay baahiyeen saraakiil horay uga soo shaqeysay NISA, Ikraan ayaa ka mid aheyd sirdoonka NISA, sidoo kale Ikraan ayaa ka mid aheyd xoghayaashii duqii dhintay ee Muqdisho Injineer Yariisoow.
Sida ay xaqiijiyeen xubnaha qoyskeeda, Ikraan ayaa iskaga tagtay shaqadii ay u heysay sirdoonka NISA, waxaana dhowr mar ay diiday dalab uga yimid sirdoonka oo ahaa in ay shaqadeeda dib ugu soo laabato.
Abdalla abdalle waxa uu ku doodayaa in Ikraan ay khaarijiyeen Fahad Yaasiin iyo Abu Cumar oo isku heyb ah, iyo nin lagu magacaabo Kulan Jiis kaasi oo qaraabi yihiin Farmaajo.
Sababta ugu badan ee loo dialy ayuu Abdall Abdalla Ku sheegay in ay tahay “sifeyn” isaga oo xusay in gudaha sirdoonka ay ka socoto sifeynta dadkii ogaa xogaha Fahad iyo Kulane Jiis kuwaasi oo doonaya in ay noqdaan xildhibaano xilli lagu jiro xaaladda kala guur.
Abdalle Abdalle ayaa facebookiisa ku soo qoray in uu helay xog sheeegeysa wada hadal u socda Al-shabaab iyo Abu Cumar, waxaa uuna sheegay in hadii la isfagarto ay Al-shabaab iyagu sheegan doonaan afduubka iyo dilka Ikraan, taaso oo culeyska ka dajin doonto Fahad iyo Jiis oo iyaga loo heysto kiiska.